अन्तिम लडाई, प्रचण्डहरू र सपनाहरू
Posted by Nirajan Thapa March 03, 2013
केहि दिनदेखि सामाजिक सञ्जालहरूमा निकै नै बाँडिएको एउटा भिडियो रहेछ – “जित्नै पर्छ यो अन्तिम लडाई तिमीले लडेर...” बोलको जनवादी गीतको प्रस्तुती । सायद दशक अगाडिको हुनुपर्छ यो । क्रान्तिकारी कलाकारहरूले जिवन्त अभिनय रहेको भिडियो हेर्दाहेर्दै मेरो पनि आँशु झरे । मेरा केहि साथीहरू बताउँदै थिए – उनीहरू पनि उस्तै भावविभोर भएछन । गीत त मार्मिक छदैँछ त्यसमाथि कलाकारहरूले कथात्मक तरिकाको प्रस्तुतीले जोकोहीलाई पनि छुन्छ । यसैकारण पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सांस्कृतिक विभागको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ । किनभने, गीतले योद्धाहरूलाई लडाइँ लड्न प्रेरित गर्दछ, किनभने गीतले जनताहरूलाई आन्दोलनको महत्व बुझाउँछ र सबभन्दा विशेष कारण किनभने गीतले अधिकांशलाई छुन्छ । मैले हेर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेको उक्त भिडियोमा अर्को एउटा दुर्लभ दृश्य पनि देखेँ जसमा माओवादी जनयुद्धका सुप्रिमो प्रचण्डका साथमा वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं सशस्त्र विद्रोहका अर्का महत्वपूर्ण नेता डा. बाबुराम भट्टराई पनि सांस्कृतिक कार्यक्रममा यहि गीत माथि गरिएको प्रस्तुती हेरेर भक्कानिएर रोएका छन् । सारांशमा भन्दा, कार्यक्रम हेर्नलाई उपस्थित अधिकांश मान्छेहरू रोएका छन् । गीतले छोएको छ उनीहरूलाई ।
आज समयले कोल्टे फेरेको छ । सिमान्तकृत र गरिव जनताहरूबाट धेरै पर शहरमा छन् । महलमा बस्दछन् प्रचण्ड र बाबुरामहरू । क्रान्तिको बाटोबाट पूर्ण विचलित छन् । न हिजो थियो न आज नै छ, खासमा परिवर्तनको सपना उनीहरूले कहिल्यै साँचेनन् । आज यस्तो लागिरहेछ, उनीहरूसँग फगत बाड्नलाई सपनाहरू थिए । जहाँ जतिखेर जुनजुन स्वरूपमा उनीहरूलाई सपनाको खरिदविक्रीमा लाभ हुने स्थिती रह्यो तहाँतहाँ त्यसैगरी सपनाको खरिदविक्री गरे । अहिलेपनि त गरिहेछन् ! हिजो जंगलमा गरिपगुरूवाहरूको मुक्तिका लागि देखिएका सपनाहरू ती केवल देखिनका लागि देखिएका थिए । किनकी, त्यसको कारण एकदम राजनैतिक थियो । उनीहरूले त नौटंकी नै गरेका थिए तर सबभन्दा दुःखलाग्दो कुरो उनीहरूले आफैले देख्न सिकाएको सपनालाई आत्मासाथिकरण गरी सपनालाई विपनामा परिणत गर्ने पवित्र अठोटका साथ युद्ध मैदानमा रातोतातो रगत बगाउन तत्परभएका निर्दोष र विवश जनताहरूले क्रान्तिमा समर्पित भएर लाग्नुलाई पनि नौटंकीको एक पक्ष भनेर आँकलन गरे । र, अहिले यस्तो विडम्बनापूर्ण स्थिती निर्माण हुन गयो कि उनीहरू आफैले सृजना गरेको स्वयंयको परिचय गुमाउन पुगे । ती परिचयहिन मानिसहरू भएका छन् । र, बनेका छन् गन्तब्यहिन यात्रीहरू । उनीहरूसँग कहाँ पुग्ने ? कसरी पुग्ने ? कुनै योजना छैन ।
अब त उनीहरूका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू समेत परिवर्तन भएका छन् । हिजो उनीहरूको केन्द्रिय महत्वमा जनता थिए । जनतासँग गाँसिएका गाँस, बास र कपासका सवालहरू थिए । तर अहिले यी विषयहरू उनीहरूको छनौटका परिधीभित्र पर्दैनन् । केवल एउटै खास स्वार्थ छ उनीहरूको कि सत्ताको बागडोर चलाउने र “विदेशी प्रभु”को सेवामा इमान्दारितापूर्वक लागिपर्ने अनि उनीहरूका आँखामा सदा प्रिय बनिरहने । त्यसैले त उनीहरूलाई देशको सिमासम्बन्धी महत्वपूर्ण विषय समेत हावादारी लाग्यो । देशमा राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन एवं अन्य आन्तरिक विषयहरूमा जनताको मत बुझ्न गरिने जनमत सङ्ग्रहलाई उनीहरूले सिमाना निर्धारण गर्नका लागि प्रयोग गरिने उत्तम पद्धति हो भनेर मात्र बुझेनन् – नीतिका रूपमा समेत झण्डै पारित गरेनन । हिजो जंगलमा हुँदा उनीहरू सत्यको नजिक थिए । को देश र जनताको हितमा छन् वा हुन् भन्नेमा स्पष्ट थिए । अहिले एकाएक उनीहरू परिवर्तन भएका छन् । उनीहरूलाई विश्वास गर्ने हो भने नेपालमा भारतीय विस्तारवादको रबैयाले कुनै असर गरेको छैन । देशको राजनैतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा देखापरेको साम्राज्यवादी हस्तक्षेप उनीहरूका लागि स्वीकार्य छ । समग्रमा भन्नुपर्दा – हिजो जे उनीहरूलाई बेठिक लाग्थ्यो, अहिले त्यो सब ठिक र दुरूस्त लाग्न थालेको छ ।
हिजो उनीहरूलाई परिवर्तनका नायक सम्झने जनताहरू आज तिनैको कामकारवाहीको तौरतरिका देखेर तीनछक परेका छन् । खासमा उनीहरू जनताका लागि कहिल्यै लडेका रहेनछन् भन्ने आज छर्लङ्गै भएको छ । घामजस्तै छर्लङ्गै भएको छ – प्रचण्डहरू गफ चुटनमा मात्र “प्रचण्ड” छन । भाषण गर्नमा मात्र माहिर छन् । तर यी साँच्चीकै अयोग्य छन् – जनतासँग मिलेर जनताको लडाइँ लड्न । किनकी, यिनीहरूसँग जनताको मुक्तिको सपना बाँकी छैन !